- hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ataovy ny lalao
ankizivavy tsy hamiravira ny lalao Makeup aterineto. Raha izany Neny tsy mamela azy mba handalina an-kitapom-bola, dia milalao ny fahafinaretana virtoaly maimaim-poana izy tsy afaka. Misy mahaliana kokoa, satria ny lalao dia mihoatra lavitra makiazy ary ny tena mamirapiratra! Sequins afaka hatory, fara fahakeliny, ary tsy misy olona ho latsa. Alohan'ny saribakoly, andriambavy, mermaids, ny mahery fo ny boky tantara an-tsary, Fairy. Ry zareo handeha eo amin'ny daty na antoko, na voatery nankany an-Fetibe - avokoa ny tranga rehetra dia fahafahana hampihatra ny fomba vaovao ny make-up sy hijery ny vokatra mivantana. Hanandrana mora sy azo antoka, satria afaka manala ny tsy fisotroana.
Ataovy ny zanakao-vavy
Vonoy ny fotoana ao amin'ny birao
Avy amin'ny Princess To Influencer
Tontolon'ny fampakaram-bady Princess
Red Stars Stars
Avy amin'i Nerd To Fab: Prom Edition
Matihanina momba ny lamaody
Lamaody miaraka amin'ny namana Multiplayer
Zavamaniry zazakely Ririnina zazakely
Tina lehibe ny andro fahavaratra
Confessions ny Shopaholic any Maldives
Stayhome Princess Makeup lesona
Lalao Makeup tamin'ny Category:
Farany Ataovy ny lalao
Akanjo volom-bolo miloko
Fomba lamaody amin'ny fomba fararano
Zava-mahaliana Princess Art 2
Ilay mpanamboatra Avatar tonga lafatra
Sekolin'olomalaza avy ao an-trano miakanjo
Fanamby mahafinaritra an'ny Princesses Fruity Print
Olana amin'ny fitiavana an'i Elsa
Fotoana fandroana zazavavy Super Water
Lalao Online Rehetra
ny fahazazana sy ny tanora - izany no tonga lafatra ravaka, fa toy izany nahary ny olona, ​​fa na oviana na taona te hanao ny bika aman'endriny fanampiny fahasoavana, ary mampiasa noho izany samy hafa fitaka sy ny lalao ho an'ny ankizivavy makiazy sy lalao bolo manampy mba hianatra ny fototry ny fiovana efa tamin'ny mbola kely aza.
Fa ny tena tsara indrindra fashionistas lalao ny make-up sy ny bolo
Ireo mahafinaritra noforonina indrindra ho an'ny ankizivavy, mba hanampiana azy ireo hahatakatra ny lamaody fironana sy ny lamaody avy hatrany fironana, ary koa ny mianatra zavatra mahasoa maro izay afaka hitandrina ny fijery araka izay azo atao mamy sy miroborobo.
Ary ny hatsaran-tarehy ny volo sy ny tarehy - fa tsy fotsiny bolo-damaody sy ny makiazy, fa koa ny fahasalaman'ny ny bika aman'endriny. Mampiseho ny volo maharitra hanambana, nanitsy sy fandokoana, ataontsika loza ho amin'ny firafitry ny volo, fa nampalama vokany izany, fitandremana azy mamirapiratra sy silky ianao, dia mila mampiasa moisturizing ary mikolokolo hira.
nandritra ny lalao ho an'ny tovovavy Fandram-bolo ianao mianatra ny Mazava ho azy fa ny mpanety-stylist sy mianatra ny hanana mendrika volo fikarakarana sy ny volo styling sy isan-karazany ny fety mitovy amin'ny bolo dia hanampy anao miova isan 'andro mba hihaona amin'ny lamaody ny hetsika ka hahatonga Nankafizinay koa maso. Ao amin'ny virtoaly Salon hatsaran-tarehy ianao mahazo ny malaza rehetra sy malaza fanamboarana mba hanomboka ny majika ny fampianarana.
Soso-kevitra mba hanampy hanorim-ponenana ao amin'ny dingana voalohany. Taorian'ny ny toromarika, mampiasa shampoos, conditioners, balsams sy ny volo saron-tava.
Raha ny volo no nanasa sy nanosotra fanampiana Molotov, tonga ny fotoana hanombohana trimming fa vao haingana ianao. Eo ambany fitarihan'ny matihanina iray za-draharaha ianao hamorona tena sangan'asa.
Raha ny marina vonona, hametraka ny curls amin'ny singam-bolo iray fanamainana sy ny volo volo tsifotra hidin-trano. Inona no mahafinaritra amin'ny virtoaly trano fisotroana, dia ny fahafahana mamorona hafa vaovao indray, raha ny vokatra azo dia tsy mahafa-po. Eo amin'ny tena fiainana, tsy maintsy mandeha hatramin'ny iray nahomby mandra-hihety volo mitombo ny volo indray, fa isika kosa dia samy hafa rehetra.
nianatra ny fahaiza-make-up
lalao an-tserasera Makeup - fanohizana ny foto-kevitry ny be tsara tarehy. Eto, na dia amin'izao andro, dia afaka miaina be dia be harisika kokoa noho ny hihety volo. Raha tsy tianao ny fomba mijery ny aloka, mena be loatra na ny mascara nohosorana, ary afa-tsiny mamirapiratra lokomena, dia afaka foana hosasana ho afaka makiazy sy tonga amin'ny fomba fiasa vaovao. Amin'ny lalao video, ity dingana ity kokoa fifadian-kanina, satria afaka manala makiazy iray tsindry ny totozy na tanteraka hanatsarana ny lalao.
Access ho haingon-trano faritra, dia be mivelatra kokoa noho ny na dia ny reninao, satria efa nanome ny safidy rehetra sy ny faniriana. Raha tsy mbola manomboka Mitifitra loko, mianatra momba ny fomba tarehy hafa, izay tsy maintsy mahalala ankizivavy tsirairay.
Indraindray dia ilaina ny hanao fanadiovana hoditra,
Ny fanaovana ny saron-tava,
Ary rehefa afaka manasa amin'ny rano, dia zava-dehibe ny namaoka azy tamin'ny menaka fanosotra amin'ny hoditra,
Ampiharo ny fanosotra mba hisorohana ny endriky ny pimples, ary amin'ny vanim-potoana lehibe - ketrona,
Raha misy pesky hoditra kileman-toetra, tsara kokoa handray manitsy menaka - makiazy fototra no tena fitondran'i fashionista rehetra,
Ary raha ny fiomanana rehetra dia nanao fotoana, dia afaka manomboka ny tena fanasan'ny Tompo ny fiovam-po.
mahay hetsika afaka hanamafy ny endri-javatra manintona indrindra raha niafina lesoka sasany.
Raha tsy misy volo tsara tarehy sy makiazy tsy afaka manao ny mety fombafomba fotoana, ary ao ny isan'andro ny ankizivavy tsara tarehy te-hijery. Lalao ho an'ny tovovavy rehetra manao volo sy makiazy aterineto aoka fantatrao momba ny hatsaran-tarehy sy ny fitsipika kokoa sy hampihatra izany fahalalana aoka virtoaly, fa amin'ny fampiharana.
Vehivavy makiazy - dia kanto. Ny hany tanjona - mba hahatonga ny vehivavy tsara tarehy kokoa, tamin'ny fy Hody olon-kafa lesoka sy hanamafy ny undoubted tombontsoa. Ary aza mihatra be ny tarehiny tahaka ny vovoka, fototra, lokomena sy ny mascara, indrisy, ho avy izao, maro ny tovovavy. Mba ho tena tanteraka ny asa, dia ilaina ny tafiditra ao lafin-javatra maro - hoditra karazana, endriny, jiro ary, mazava ho azy, mba hanaraka ny lalàn 'ny fotoana sy ny toerana. Art hampiasa makiazy haingon-trano, toy ny fahaiza-manao rehetra, dia tsy ho tonga avy hatrany. Dia mila fiofanana nandritra ny fotoana ela ny fitsarana sy ny fahadisoana. Ary raha mihevitra fa ny vavy tonga ny fotoana hianarana ny singa voalohany ny siansa mba hampahamendrika ny tenany, miditra ao amin'ny mahitsizoro fikarohana ny teny hoe "manao-ny lalao ho an'ny ankizivavy." Voaangona eo amin'ny tranonkalan'ny ny lalao ao amin'ny andian-dahatsoratra ity mifandray tsy mba ho izy, fa ny vehivavy sary iray manontolo. Dia ilaina ny mifidy akanjo, firavaka sy ny kiraro, ka namorona iray stylish Ensemble.
Misy lalao Fandram-bolo izay tokony ho voafidy ho ny mahery fo ny safidy maro, ataovy mahaliana kokoa. Tsy ny kely indrindra satria, amin'ny lalao ho an'ny ankizivavy Fandram-bolo ankapobeny tafiditra ampy hafahafa. Eto dia afaka mahita manga, maitso sy mavokely volo, manaitra bolo, mahay nanao "Babylona ny lohany." Eo amin'ny fiainan'ny zaza iray dia inoana ny dia manandrana azy ny volony. Ary eto dia misokatra malalaka ho an'ny famoronana toerana. Noho izany tsy misy isalasalana fa ny make-up lalao an-tserasera fanabeazana lalao dia ny safidy kely Tsy ho an'ny ankizivavy, fa noho ny hatsaran'ny tanora. Rehefa afaka izany andro izany, rehefa tsotra voalohany mahaforona - nataony ho-up sy eyelashes mitondra lokomena - nataony tamin'ny prom alina dia lasa ela.
Modern tanora ireo namany amin'ny manaova-efa avy amin'ny kilasy zandriny ka namelatra lahatsary an-tserasera antsoina hoe "Tena tsara ny manao ny sekoly." Amin'ny toe-javatra toy izany, dia matetika misy fiantraikany eo amin'ny heviny ny arakaraka. Raha ny marina, ny tsirony, koa, mila mampianatra. Amim-pitiavana toy izany i Neny dia mipetraka amin'ny zanany vavy eo amin'ny solosaina, mianatra, milalao izay matetika manomboka sokajy io - lalao ho an'ny ankizivavy updo na manao-up angamba lalao ho an'ny tovovavy. Ary mbola mahafantatra ny tsipirian'ilay ny hatsaran-tarehy sy ny hanao volo simia. Inona no loko tokony tsy ho mitambatra. Rehefa mety mamirapiratra makiazy, ary rehefa - efa ho fahatsapana. Izay mijery tsara, fa izay efa niantsoana ny takela-pahatsiarovana ny baranahina fanaony hatrizay. Ahoana no mifidy ny karazana olona mba hanapaka sy ankapobeny sary. Inona no maha samy hafa hariva, ary tsotsotra bolo. Ary izany rehetra izany - ao amin'ny sarin-teny momba ohatra eo amin'ny toerana www. lalao-lalao. fr. ua. Ny fanaovana antoka ny lalana izay lalao ho an'ny zazavavy Makeover-tserasera no tsy mahaliana, fa tena ilaina.